PressReader - Kwayedza: 2018-10-12 - Kereke vanhu
Kwayedza - 2018-10-12 - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza
Musoro webhuku unozadziswa naMary anovimbisa kuzivisa vemapepanhau nezvekusazvibata kwaPastor Mwenje naSarah. Izvi zvinojekeswa pavanenge vari kuchipatara cheWest End, paanovaudza kuti aizotanga kufumura nyaya yavo yekupa Sarah mwana kuburikidza nevepepanhau reH- Metro kana reKwayedza. Pastor Mwenje vanomukumbira kuti asadaro nekuti zvaizovaputsira kereke yavo.
Musoro wemutambo unoti Kereke Inofa unoburitswa pachena naZebra anotsigira kuti kereke ife. Tinozviona paanomuka pamubhedha muchipatara cheWest End mushure mekunge afenda, anoshevedzera kuna Pastor Mwenje kuti kereke yavo ngaife, kwese kwaive kufa nekuti yakanga yaparadzawo imba yake.